Tinma village scorched / မီးရှို့ခံရသော တငျးမကြေးရှာ – Kyaw Zaw Oo's Blog
March 23, 2020 December 10, 2021 web_master
Tinma village scorched / မီးရှို့ခံရသော တငျးမကြေးရှာ
[ English text first / Burmese text below ]
Around 11 a.m. yesterday on March 22nd 2020, nearly the whole human settlement of Tinma village in Kyauktaw township (of northern Rakhine state) was reported to have been burnt down to earth. The fire left about 4000 villagers (of 700 households) homeless.
There was no fighting between two hostile parties at the time when the fire started. Some gunshots were heard, the villagers instantly left the village, and soon it was on fire.
This obviously intentional arson has also made the villagers run-away IDPs.
၂၀၂၀ မတ်​လ (၂၂) ရက်​ ယမန်​​နေ့ နံနက်​ (၁၁) နာရီ​လောက်​မှာ ရခိုင်​ပြည်​နယ်​​မြောက်​ပိုင်း ​ကျောက်​​တော်​မြို့နယ်​ တင်းမ​ကျေးရွာတစ်​ရွာလုံးနီးပါး မီးရှို့ပြာချခံရတယ်​ လို့ ကြားသိရပါတယ်​။ အိမ်​​ခြေ (၇၀၀) ​လောက်​ရှိတဲ့ တင်းမ​ကျေးရွာရဲ့ ရွာသား​(၄၀၀၀) မျှ အိုးမဲ့ အိမ်​မဲ့ ဖြစ်​သွားမှာဖြစ်​ပါတယ်​။
မီး​လောင်​တဲ့ အချိန်​မှာ တိုက်​ပွဲဖြစ်​ပွား​နေခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ​သေနတ်​သံ​တွေ ကြားရတယ်​၊ ရွာသား​တွေက ရွာက​နေ ချက်​ချင်းစွန့်​ခွာတယ်​၊ ပြီးတာနဲ့ ရွာမီး​လောင်​​နေတာကို ​တွေ့ရ​တော့တာပဲ ဖြစ်​တယ်​။
ဒီ သိသာ​ပေါ်လွင်​တဲ့ မီးရှို့မှုဖြစ်​စဉ်​ဟာ တင်းမရွာသား​တွေကို ထွက်​​ပြေး​နေရတဲ့ စစ်​​ဘေး​ရှောင်​ ​နေရပ်​စွန့်​ခွာသူ​တွေ ဖြစ်​သွား​စေခဲ့တယ်​။
၂၃ မတ်​လ ၂၀၂၀
၂၀၂၀ မတျလ (၂၂) ရကျ ယမနျနေ့ နံနကျ (၁၁) နာရီလောကျမှာ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျး ကြောကျတျောမွို့နယျ တငျးမကြေးရှာတဈရှာလုံးနီးပါး မီးရှို့ပွာခခြံရတယျ လို့ ကွားသိရပါတယျ။ အိမျခွေ (၇၀၀) လောကျရှိတဲ့ တငျးမကြေးရှာရဲ့ ရှာသား(၄၀၀၀) မြှ အိုးမဲ့ အိမျမဲ့ ဖွဈသှားမှာဖွဈပါတယျ။
မီးလောငျတဲ့ အခြိနျမှာ တိုကျပှဲဖွဈပှားနခွေငျး မရှိခဲ့ပါဘူး။ သနေတျသံတှေ ကွားရတယျ၊ ရှာသားတှကေ ရှာကနေ ခကျြခငျြးစှနျ့ခှာတယျ၊ ပွီးတာနဲ့ ရှာမီးလောငျနတောကို တှရေ့တော့တာပဲ ဖွဈတယျ။
ဒီ သိသာပျေါလှငျတဲ့ မီးရှို့မှုဖွဈစဉျဟာ တငျးမရှာသားတှကေို ထှကျပွေးနရေတဲ့ စဈဘေးရှောငျ နရေပျစှနျ့ခှာသူတှေ ဖွဈသှားစခေဲ့တယျ။
၂၃ မတျလ ၂၀၂၀
Previous စဈတှေ အဝေးပွေးကားလမျး စဈဆေးရေးဂိတျမြားကိစ်စ
Next How is Rakhine population left behind in Myanmar’s fight against COVID-19?